Ukwandisa impumelelo ukuze kuphuculwe iziphumo | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 13, 2009 NgoLwesibini, Oktobha 9, 2012 Douglas Karr
Ibhlog kaTripp Babbitt kunye neeleta zeendaba kwi Inkqubo eNtsha yokuCinga ibikhula nyani kum.
Ukusukela ukuhlangana kukaTripp kumsitho wokuthetha wengingqi, wabelane ngetoni yolwazi kunye namava am ngqo, kwincwadana yakhe, nakwibhlog yakhe.
Esinye sezizathu zokuba ndicinga ukuba ndiyakonwabela ukubhala kwakhe kunye nezifundo zakhe kakhulu kukuba uTripp uhlalutya ngolunya amashishini kwaye uhlala efumanisa ukuba imilinganiselo kunye neenjongo azingqinelani neengxaki ezikhoyo.
Kwimeko apho yayiyinkampani elinganisa inani leefowuni zokuxhasa abathengi kwaye ivuze amaqela ayo abathengi ngokuxhomekeke kubungakanani beminxeba abakwaziyo ukuyigqiba. Njengoko uTripp echaza, inkampani ayikhange ihlalutye ukuba kutheni befumana iifowuni kwaye zithini iindleko zeqela lenkonzo yabathengi xa kuthelekiswa nokulungisa iingxaki zengcambu oko kubangele iifowuni kwasekuqaleni.
Ingxaki kunye neempawu zahlulwe phakathi kwamasebe amabini angaze asebenze omnye komnye kwaye angenazinjongo ezifanayo. Akukho sibonelelo sokulungisa umba wokuqala kuba iingxaki ezibangelwa zithunyelwa kwisebe elilandelayo.
Kangangexesha elithile ndiye ndangummeli ukufumana into esebenzayo kunye nokulungisa kakuhle, endaweni yokugxila kwinto engasebenziyo.
Kukho ezininzi iinkokheli ezidumileyo kunye neenkqubo zeshishini ezikholelwa ngokuchaseneyo… baya kukuxelela ukuba ukuba uphumelele ngama-99%, kufanele ukuba usebenzela ukuphucula le 1% yokugqibela. Yinkqubo ephazamisayo ngokungapheliyo kwaye ishiya umkhondo wabasebenzi abagxothiweyo nabanxungupheleyo.
Ndiyakholelwa ukuba iinkokheli eziphumeleleyo, iinkampani kunye nezicwangciso ziyandisa impumelelo kunokuba zizame ukunciphisa ukusilela:
Kumajelo asekuhlaleni, bendi ngummeli we Ukwenza nokuxhobisa iinkampani ukuba zisebenzise imidiya yoluntu endaweni yokusebenzisa imigaqo nemida.
Ukubhloga, ndizama ukuqinisekisa ukuba umxholo endibhalayo umalunga nawo ukukhuthaza abafundi ukuzama itekhnoloji entsha kunokuba uyiphephe.
Njengenkokheli, ndiyakholelwa kuyo ukuthelekisa italente yomqeshwa neemfuno zombutho endaweni yokuzama ukunyanzela abasebenzi kwizikhundla zokungaphumeleli ngokuqinisekileyo. Ukuba unesitshixo, musa ukuyixela ukuba ayisosando silungileyo. Yiya uthathe isando ukuba yile nto uyifunayo.
Kwintengiso ye-Intanethi, kubalulekile ukuba uqhubeke nokubamba into esebenzayo kwintengiso yakho ekwi-intanethi kunokuba uzame ukuqonda ukulungisa okungazange kusebenze. Ewe kuya kufuneka ulinge xa ​​kuvela amathuba, kodwa tyhala abaphulaphuli bakho kwicala lempumelelo kunokuba uzame ukuphepha ukusilela.
Nokuba ungumzali, ndiyifumene le ndlela isempilweni kakhulu. Ukuba abantwana bam bebethanda iMathematika (abayenzayo) kodwa bengazithandi izifundo zoLuntu, khange ndibenze bafunde iincwadi zembali busuku ngabunye… ndibakhuthaze ngakumbi kwiMathematika. (Ndifuna amabanga afanelekileyo kuzo zonke izifundo, nangona kunjalo). Bobabini abantwana bam banamabanga aphezulu… kwaye unyana wam ngoku ungumfundi weehonours e-IUPUI, kwiMathematika nakwiFizikiki.
Ndade ndifunda apha eSparkpeople, indawo yabo bethu batyebe kakhulu kwaye bajonge ukuba sempilweni, ukuba izifundo zamva nje zibonisile ukuba abantu umthambo imizuzu eli-10 ngosuku baphumelele ngakumbi kunabo basebenza kwimizuzu engama-90 emiselweyo. Umsebenzi omfutshane ubonelela ngemvakalelo yokufezekisa (endaweni yentlungu) kwaye abantu babekwazi ukubambelela kwisiqhelo.
tags: utshintsho ulawulophucula iziphumowandise impumelelo
Epreli 14, 2009 ngo-9: 04 AM
Kuyahlekisa ubhale ngale nto namhlanje, kuba izolo nje ndidibene noCarla kunye no-Anna be-Ignite HR Consulting kwaye baxoxa ngenkqubo yoqeqesho abayilawulayo ebizwa ngokuba "Amandla" evakala ngathi iyancomeka kwesi sithuba. Into endiyithathayo yayikukuba inkqubo ye-Strengths - endaweni yokufuna ukuphelisa ubuthathaka - inceda umntu ngamnye ukuba achonge amandla akhe, oko kukuthi, yintoni abanobuchule kuyo kunye nento abanomdla ngayo, ukuze bakwenze ngakumbi oko ukuze kuxhamle umbutho. kunye nokuphila kakuhle kwabo.
Ngokufanayo, ngobudala bendifuna ukubeka amandla am ngaphezulu kwezo zinto ndilungile kwaye ndizonwabele, kuba: a) kukho iiyure ezininzi kuphela ngosuku (kunye nobomi), kutheni ungazami ukwenza ngcono endinako; b) kukho ngaphezu kokwaneleyo ekufuneka ndikwenzile endingalunganga okanye endingakuthandiyo; kwaye c) ixhobisa ukwakha impumelelo kwimpumelelo (kungakhathaliseki ukuba yimpumelelo enkulu okanye encinci, kuba ndithatha oko ndingakufumana. :)).
Ubenosuku oluhle mhlobo wam.
Epreli 14, 2009 ngo-10: 16 AM
Ukugxininisa kwizinto ezintle kunye nento oyithandayo. Andingomyili wewebhu kwaye nangona ndizama andisoze ndizame ukuyazi. Kukho abanye apha phandle abaya kwenza umsebenzi ongcono kunam kwaye bawenze ngokukhathazeka okuncinci. Kufuneka ndigxininise kwizinto ezindisebenzelayo kunye nezinto endizilungeleyo kwaye ndibe ngcono kwezo zinto.